Xildhibaanka Homa Bay oo soo saaray hindisa sharciyeed la doonayo in 40 ismaamul ay dalka uga go’aan – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanka Homa Bay oo soo saaray hindisa sharciyeed la doonayo in 40 ismaamul ay dalka uga go’aan
Mudanaha laga soo doortay degaanka Homa Bay Town Peter Kaluma ayaa soo saaray hindisa sharciyeed uu uga gol leeyahay in 40 ka mid ah 47-da maamul goboleed ay uga go’aan wadanka qeybihiisa kale.
Waxaa uu ku doodayaa in marka laga soo tago ismaamulada kala ah Nyeri, Murang’a, Kiambu, Kirinyaga, Nyandarua, Embu, iyo Tharaka-Nithi inta kale ay noqonayaan hal wadan oo loo yaqaano jamhuriyada shacabka Kenya.
Mr Kaluma ayaa hindisaha uu soo saaray ku saleeyay in maamul goboleedyadaasi gaar u go’aya dowladihii la soo dhafay ay si joogta ah u gacan bidixeyeen.
Mr Kaluma ayaa doonayo in arrinta uu soo jeediyay uu si qota dheer u eego gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC.
Waxyaabaha uu ku doodayo ayaa waxaa ka mid ah in maamulka jubilee uusan dowlad wadaajinta siinin fursad buuxda oo degaanada kala duwan ee dalka loogu horseedi karo kobac dhaqaale.
Xildhibaanka ayaa sheegay in hindisa sharciyeedkan uu uga gol leeyahay in dastuurka dalka laga isticmaalo isbedel lagu sameeyo si wadan kale loo soo dhiso.
Hogaamiyaha urur weynaha mucaaradka Nasa Raila Odinga ayaa isagoo ku sugan Maraykanka ka dhawaajiyay inaysan ahayn arrin la fududeysan karo hadaloi horay uga soo yeeray qaar ka mid ah madaxda siyaasadeed ee gobolka xeebta.
Maamul goboleedyada uu xildhibaanka Homa Bay soo jeediyay inay dalka intiisa kale isaga go’aan ayaa kala ah Turkana, galbeedka Pokot, Samburu, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo-Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Nakuru, Narok, Kajiado, Kericho, Bomet ,Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Lamu, Taita Taveta Garissa, Wajeer, Mandera ,Marsabit, Isiolo, Meru, Kitui, Machakos, Makueni , Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira iyo Nairobi.
Hindisahan ayaa la doonayaa in la horgeeyo baarlamaanka si ay u tageraan 233 ka mid ah 349-ka xildhibaan iyo 45 ka mid ah xubnaha aqalka sare ee senetka oo ka kooban 67.
← Maxkamada ugu sareysa dalka oo maanta fadhi yeelanaysa ka hor dhageysiga dacwado loo soo gudbiyay
Ra’iisul wasaraha Britain oo Ruushka ku eedaysay in uu faragaliyay doorashada →